အသက် ( ၅၀ ) မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင် အသက် ( ၃၀ ) မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားသင့်ပါပြီ
May 1, 2019 Thuta Star 0
အသက် ၅၀ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင်အသက်၃၀ မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားပါ အသက် ၅၀ အရွယ်တွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိသလဲမေးခဲ့ပါတယ် အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်၃၀တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်သင့်ပါပြီ..! ၁. ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့။ သောက်မိပြီဆိုရင် ဖြတ်ပစ်ပါ။ ၂. အမြန်စာတွေကို မစားပါနဲ့တော့။ ၃. […]
စစ်တမ်းတွေအရ မိန်းကလေးတွေ ပြောတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်မှာ ရှိရမယ့် အရည်အချင်းများ
အမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောသဘာဝက နားလည်ရတော်တော်ကိုခက်ပါတယ်။အားလုံးနီးပါးပြည့်စုံနေတဲ့သူတောင် မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် သူတို့နှလုံးသားကို ဘယ်လိုသိမ်းပိုက်ရမလဲဆိုတာ တွေးဆရခက်နေတတ်ပါတယ်။အမြဲလိုလို ယောင်္ကျားလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံစံကိုပဲ ဖော်ပြခဲ့တော့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်ပုံစံကို တစ်ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ဝက်လောက် သင်ပိုင်ဆိုင်နေရင်ကို ခြေလှမ်းတိုးဖို့လမ်းစပါပဲ။ ။ 1.ယောင်္ကျားဆန်ခြင်း ယောင်္ကျားဆန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်း၊ရက်ရောပေးကမ်းခြင်း၊မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထား၊ရဲစွမ်းသတ္တိတို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုယောကျာင်္းဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယောင်္ကျားလေးတွေကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းမခါနိုင်ပါဘူး။ 2.ဟာသညဏ် […]
( ၃ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဖွင့်ပွဲမှာ ထီပေါက်လို့ ပျော်နေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
ရွှေပိုးအိမ်က မေလကို ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ စတင်ကြိုဆိုလိုက်ပါပြီ။ ထီပေါက်လို့လည်း ပျော်နေပါတယ်။ ရွှေပိုးအိမ်တစ်ယောက် ထီပေါက်လို့ ပျော်နေပါတယ်။ သူမတင်ပျော်တာမဟုတ်ပါဘူး သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ပျော်နေကြပါတယ်။ ရွှေပိုးအိမ်က ဒီနေ့ထွက်တဲ့ ထီမှာ ငါးသောင်းဆု ပေါက်ခဲ့တာပါ။သူမက ငါးသောက်ဆုမှာ ဆ-၄၆ ဆိုတဲ့ နံပါတ်နဲ့ ပေါက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီပေါက်တဲ့အတွက်လည်း […]
တောင်ကြီးမြို့(၄)လောင်းပြိုင် လူသတ်တရားခံက ဆေးတိုက်ပိုင်ရှင် နှင့် မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ဦးတင်အုန်း
တောင်ကြီးမြို့ (၄)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ (၂)ရက်အတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းများဖော်ထုတ် နေပြည်တော်၊ မေ ၁ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ အမှတ်(၁၁၈)နေ ဒေါ်အေးရွှေ ၇၀နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ (မြင်းဖြူနှစ်ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက်ပိုင်ရှင်)၊ (ဖ)ဦးအန်ပန်သည် ပင်လုံမြို့၊ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲသို့ သွားရောက်ပြီး ၂၈-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း […]
ကသာမြို့_မီးပွိုင့်အနီးတွင် လူတစ်ယောက်သေ​ကြောင်းကြံစည်မှုဖြစ်​ တချို့အရာတွေဟာ ကားဆိုင်ကယ်တွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျ သေကြောင်းကြံတယ်ဆိုရင်လဲ သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်သင့်ပါဘူး သားသမီးမျက်နှာမှ မထောက်ဗျာ Steven zay Unicode ကသာမွို့_မီးပှိုငျ့အနီးတှငျ လူတဈယောကျသေ​ကွောငျးကွံစညျမှုဖွဈ​ တခြို့အရာတှေဟာ ကားဆိုငျကယျတှေရဲ့အပွဈမဟုတျဘူးဗြ သကွေောငျးကွံတယျဆိုရငျလဲ သူမြားဒုက်ခရောကျအောငျမလုပျသငျ့ပါဘူး သားသမီးမကျြနှာမှ မထောကျဗြာ Steven zay ရုပ်သံကြည့်ရန်
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း မေလ ၁ ရက်နေ့မှ မေလ ၇ ရက်နေ့အထိ
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း မေလ ၁ ရက်နေ့မှ မေလ ၇ ရက်နေ့အထိ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ
တောင်ကြီး လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု သံသယရှိသူကို ကျောက်မဲတွင် ဖမ်းမိ
တောင်ကြီးမြို့၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးအပါအဝင် လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုနှင့် ပတ် သက်၍ သံသယရှိသူကို ဖမ်းဆီးစစ် ဆေးနေပြီး သေဆုံးသူများ၏ ဆွေမျိုး များအပြင် အဆက်အသွယ်ရှိသူအားလုံး ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကြောင်း ရှမ်း ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူးချုပ်ဇော်ခင် မောင်က ယမန်နေ့တွင် ပြောသည်။ ‘‘သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့သူတွေ […]
မွေးလ အလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ စိတ်နေ သဘောထားများ
January – အေးအေးလေး နေတတ်သူ ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းနိုင်သူ အချစ်ကြီးတယ် သံယောဇဉ် တွယ်တာ မြန်တယ် မေ့နိုင်တဲ့စိတ် မွေးဖွားတတ်တယ် February – အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ဘူး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုတတ်တယ် အမုန်းမပွားဘူး တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်မျိုး […]
ယ​နေ့ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့မှာ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့စေ့ စပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေး “ဖိုးချစ်”
မေဒေးနေ့မှာစေ့စပ်ပွဲကျင်းပလိုက်တဲ့ ရွှေမင်းသားလေး ဖိုးချစ် ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေးဖိုးချစ် တစ်ယောက် မေလရဲ့ပထမဆုံးရက် ဖြစ်တဲ့ မေလ၁ရက် မေဒေးနေ့လေး မှာ ၂၀၀ရ ခုနှစ်ကတည်းက ချစ်သူ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူ ကရင်မလေးမဲ့ လှိုင်းဘွဲမြို့မှာ စေ့စပ်ပွဲလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူပျိုကြီးဖိုးချစ်စေ့စပ်လိုက်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တချို့က နှမြောတဿဖြစ်ကြပေမဲ့ တချို့ကလည်း’ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖိုးချစ်ကိုလေးစား တယ်ကွယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတွဲလာတဲ့ကရင်မလေးကိုလက်တွဲမဖြုတ်လို့’ […]
နိုင်ငံတကာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေ သတိပေးလိုက်တဲ့ ကားထဲကရေသန့်ဗူးအန္တရာယ်
မှန်ဘီလူးကိုဖြတ်ပြီး စက္ကူကိုမီးရှို့တဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကို ငယ်ငယ်က လုပ်ခဲ့ဖူးတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် မှန်ကိုဖြတ်လာတဲ့ နေရောင်က ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များလဲဆိုတာကို သိနိုင်မှာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ မီးသတ်အဖွဲ့က သတိပေးချက်လေးတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကားထဲမှာ ရေသန့်ဗူးတွေမထားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေပူလာတဲ့အခါ ကားမှန်ကိုဖြတ်လာတဲ့နေရောင်ခြည်က ပလတ်စတစ်ကိုဖြတ်သန်းပြီး အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ရေဗူးထဲကရေကို ၂၅၀ ဒီဂရီအထိပူလာစေနိုင်ပြီး […]